Nin ka tirsanaan Al-shabaabka buuraha Golis oo isu dhiibay ciidanka Puntland. – Radio Daljir
Nin ka tirsanaan Al-shabaabka buuraha Golis oo isu dhiibay ciidanka Puntland.
Bossaso, Mar 22 – Shir jaraa’id oo lagu qabtay xarunta wasaarada amniga ee magaalada Bossaso ayaa lagu soo bandhigay nin hore uga tirsanaa Al-shabaabka Caalmadow ee buuraha Golis.
Ninka oo lagu magacaabo Cabdirashiid Xasan Maxamed ayaa sheegay in uu ka faa’iidaystay baaq cafis ah oo ay dawlada Puntland ay u fidisay haraaga ciidanka Al-shabaab ee hore loogu jabiyey buuraha Galgala iyo Caalmadow.
Wasiir ku xigeenka amniga Cabdi Jamaal Cismaan oo tafaasiil ka siiyey saxaafada sarkaal isu soo dhiibay ayaa sheegay in si usoo dhiibida sarkaalkani ay ku timid dadaalada ay wado dawladu ee la doonayo in lagu cirib tiro Al-shabaabka Golis.
C/rashiid oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in uu ka mid ahaa ciidanka buuraha Caalmadow, balse uu ogaaday in aanay dani ugu jirin ka tirsanaanta ciidankaas oo markii horeba fikir qaldan laga dhaadhinciyey.
Waxaa uu sheegay in uu ka tirsanaa ciidanka qaybta saadka.
C/rashiid ayaa sheegay in uu ka soo goostay kooxdii uu ka tirsanaa kadib markii uu ogaaday in la doonayo in la laayo dadka deegaanka.
Waxaa uu intaas ku daray in ciidanka halkaa ku sugani aysan ahayn oo keliya dadka deegaanka, balse ay u badan yihiin Somalida kale, lagana dhaadhiciyey dadku in ay gaalo yihiin, ayna waajib tahay in la muslimiyo.